Imfashini batch ifayela - ke lubaluleke ku ikhabethe into yesimanje
Uyini izingubo kuphela noma beveza Abaklami ukuze ajabulise dandies yesimanje kanye abesifazane! umcabango wabo awapheli, ngakho ikhabethe yethu minyaka yonke is agcwaliswa nge novelties yasekuqaleni. Kodwa kukhona izingubo, akaphelelwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo amashumi eminyaka. Khumbula zonke ibhulukwe zakho ozithandayo, jeans kubalulekile, ingubo hhayi ukuguga futhi Yiqiniso, ifayela batch. Lezi yizinto u-bayathandeka cishe yonke futhi ezifanele ezimweni eziningi.
Abakhiqizi izingubo abayitoho ezitholakalayo zenza "okusezingeni eliphezulu" imfashini kufinyeleleke kakhulu, eziningi kangaka imibono yakhe yokudala siguqulelwa izingubo uhlobo indinganiso noma zakudala. Kuyinto lolu shintsho ngesikhathi sakhe kwakungegazi ostromodnyh Shirts, eyenziwe isitayela amahembe zabesilisa. umklami French Zhan Buske, okuyinto wanika mbumbulu kanye brand efanayo "Cacharel" ngokoqobo iqhume ngo-1965, imfashini catwalks, okubonisa jikelele soqobo blouses phezu ukuyona.
ESoviet Union ifayela batch kwaba ukushayelwa athandwa. Kazi bebizelwa kuphela enkulu eSoviet Union. Igama lefayela batch - kabi Buttons IsiZulu phansi - «izinkinobho phansi". Ngaleso sikhathi, sweaters eyenziwe zonke izinhlobo imibala kusuka ezihlukahlukene izinto, wathandwa izinhliziyo amadoda cishe zonke izinsizwa nezintombi.
Izici kwesakhiwo izimpahla ezisetshenziselwa
Modern ifayela batch - kuba owesilisa noma owesifazane I jacket owufanelekela nge bopha ngesimo izintambo futhi wawabeka imikhawulo ezicijile. Ziyakwazi emangalisayo ukhululekile ukugqoka uhambe kahle ezihlukahlukene iziketi, ibhulukwe noma jeans.
ifayela Batch zingenziwa izinto eziningi ezahlukene, kodwa ngaso sonke isikhathi onobuhle ethandwa kakhulu zenziwa zikakotini. ongakhetha Ibhajethi otshivayut knitwear nge admixture we nezindwangu zokwenziwa, kuyilapho izinga imikhiqizo enjalo ngisho nezidingo eyinkimbinkimbi kakhulu.
Osayizi batnikov ubanzi kakhulu: kusuka ezincane (XS, S) enkulu (XXL, XXXL). Ngakho-ke, kokubili amadoda nabesifazane ingacosha imodeli zokunambitha, ubungako kanye ukushuba we esikhwameni. Inhlanganisela ngempumelelo imibala kanye indlela yokwenza ye impahla utawuphendvula ukunambitheka esengeziwe isithombe sakho, futhi kuzosiza kukhanye up the amaphutha sibalo.
Kufanele ibe kule sizini - ifayela batch, ngaphandle imibala egqamile, inhlanganisela ebaluleke kakhulu okwesibhakabhaka nomhlophe. Lokhu "gzhel" cishe wonke umuntu, kodwa uma ngokuphelele ungathandi lezi imibala, ungayeka ukukhetha phezu ophuzi, Mint noma violet onobuhle.
Classic futhi ezinombala ofanayo - a zonyaka ezimbalwa ngakho-ke ungabona ehola abaklami amadoda ifayela batch. ukubukeka besifazane ukuthola le mikhiqizo kuyinto ebanzi lukhulu - ladies ucabanga ukuthi kule sizini kumele kube segcekeni ethandwa letingemasayizi lahlukene kanye okubangela iphathini engalingani.
Female batch ifayela - model, libhekene ostromodnyh cut elementi yasekuqaleni zokuhlobisa. Le mikhiqizo avame ukuhlotshiswa emaphaketheni ijamo okungajwayelekile noma collar frilly.
Abaklami ngokuvamile uzizamele enokubamba ifayela batch: lokhu kungatholakala kuphela uma noma lathinta phakathi forehand. Amamodeli kungenziwa ehlotshiswe izinkinobho vintage noma izinkinobho uphawu olufanele ukubheka "Blocks" nge izintambo zezicathulo emibala, ngisho luqhephuke ku wendwangu uziphu.
onobuhle samanje amadoda
Njengoba indlela abobulili namandla, fashion akuyona wasindisa namanenekazi. Abesilisa ifayela batch zingase zishintshe kakhulu: self-ezinemibala noma variegated, wenza lendwangu noma indwangu wathungela. Manje strip ethandwa kakhulu mikhondo ezimibalabala futhi polka amachashazi. Ngakho-ke, noma yimuphi umuntu uzokwazi ukwelekelela imodeli yakho ikhabethe ukuthi igcizelela ngempumelelo ikakhulukazi isitayela zayo ngazinye.
Cishe, Zhan Buske angazanga esingakanani bayoba ethandwa yasungulwa ifayela batch. Manje cishe zonke brand eziholela ukunikela ehlukahlukene yasakazwa imikhiqizo. Ngakho bheka inketho yakho, khetha futhi ukugqoka ngifane nonobuhle ubumnandi!
Isitayela Odri Hepbern: isithonjana iminyaka
Indlela agqoke anesitayela futhi Tastefully
Merrell Shoes - owumthombo induduzo, lobubhalo kanye izinga
Kungaba yini imiphumela yokuzala inja
Amaselula clamshell Samsung: Uhlolojikelele, izici onobuhle. abanikazi Izibuyekezo
Indlela yokwenza izinwele zakho acwebezelayo futhi bushelelezi masinya?
Ukubuyekezwa kwe incwadi "Shantaram" Gregori Devida Roberts. Incazelo ngesakhiwo kanye nezici umkhiqizo
Tattoo unyawo: amahle, sexy, inkanuko
IUD 'Mirena'. Izibuyekezo kanye contraindications
Overbooking - kuyini? Umlando wemvelaphi nokuthuthukiswa